भाइबरले नेपालमा शुरु गर्यो ‘फ्री भाइबर क्षेत्र’, इन्टरनेट बिना पनि कहाँ र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भाइबर? – ZoomNP
भाइबरले नेपालमा शुरु गर्यो ‘फ्री भाइबर क्षेत्र’, इन्टरनेट बिना पनि कहाँ र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भाइबर? प्रकाशित मिति: आइतवार, आश्विन २३, २०७३ समय - ०:२५:२८ काठमाडौंः भाइबरले काठमाडौं उपत्यकाभित्र फ्रि भाइबर क्षेत्र आरम्भ गरेको छ । नेपाली भाइबर प्रयोगकर्ताहरुलाई दृष्टिगत गर्दै भाइबरले थप उत्कृष्ट सेवा र सुविधाहरु उपलब्ध गराउन तत्पर रहेको छ ।
भाइबरले संघ संस्था, ब्राण्ड र चर्चित हस्तीहरुलाई उनीहरुका फ्यानहरु र फलोअरहरुसँग पब्लिक च्याट मार्फत् सम्पर्क बनाइराख्ने सेवा उपलब्ध गराएको छ । यसका साथै भाइबरले नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई उनीहरुकै नेपाली भाषामा आफ्नो मनोभाव साटासाट गर्न भाइबरको स्टिकर बजारमा नेपाली स्टिकरहरु समेत उपलब्ध गराएको छ ।
हालैमात्र भाइबरले नेपालका भाइबर प्रयोगकर्ताहरुमाझ विश्वका ५२ राष्ट्रहरुमा भाइबर आउट मार्फत् फ्रि कल गर्ने सुविधा प्रदान गरेर नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई थप सेवा उपलब्ध गराएको थियो ।
यही २०७३ असोज २२ गतेदेखि आरम्भ हुने फ्रि भाइबर क्षेत्रको नयाँ सेवा ५ वटा प्रख्यात स्थानहरु ललितपुर मल, सिटी सेन्टर, क्याफे दि क्राफ्ट (शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वर), निमन्त्रणा रेष्टुरेन्ट (काठमाडौं मल) र डिजी टेक काठमाडौं (पाको न्यूरोड– ताम्राकार हाउसको अगाडी) मा उपलब्ध हुनेछ ।
सुबिसु केबल नेट द्वारा उपलब्ध यी फ्रि भाइबर क्षेत्रहरुमा प्रयोगकर्ताहरुले असीमित निःशुल्क इन्टरनेट सर्भिस प्राप्त गर्नेछन्, जसबाट उनीहरुले भाइबरको प्रयोग सित्तैंमा गरेर कल गर्न, सन्देश पठाउन र भिडियो कल गर्न सक्नेछन् । यी स्थानहरुमा प्रयोगकर्ताहरुले फ्रि भाइबर जोनमा लग अन गरेर चाहे जति इन्टरनेटको सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
“हामीले नेपालमा बढ्दो भाइबरको बजारलाई मध्यनजर राखेर नै फ्रि भाइबर क्षेत्र निर्धारण गरेका छौं । महान चाडको सेरोफेरोमा रमाइरहेका नेपाली प्रयोगकर्ताहरुलाई फ्रि भाइबर क्षेत्रले उल्लेखनीय सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
प्रयोगकर्ताहरुले फ्रि भाइबर क्षेत्रको सेवा उपभोग गर्दै आफ्ना प्रियजनहरुसँग सम्पर्क कायम गरेर चाडबाडको उमँग आदान प्रदान गर्न सकनेछन् । भाइबरले बडा दशैंलाई ध्यानमा राख्दै दशैं स्टिकर पनिनेपालभर सित्तैंमा प्रस्तुत गरिदिएको छ ।” भाइबर साउथ एशियाका क्षेत्रीय प्रमुख अनुभव नैयरले भने ।
निरन्तर घट्दै डलर रेट, कति छ आज बिहिबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 06 April, 2017
निरन्तर घट्दै डलर रेट, कति छ आज बुधबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 05 April, 2017
निरन्तर घट्दै डलर रेट, कति छ आज मंगलबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 04 April, 2017
निरन्तर घट्दै डलर रेट, कति छ आज सोमबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर?
Exchange Rate for 03 April, 2017
फेरी ह्वात्तै घट्यो डलर रेट, हेर्नुहोस कति छ आज आइतबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर ?
Exchange Rate for 01 April, 2017
फेरी ह्वात्तै घट्यो डलर रेट, हेर्नुहोस कति छ आज शनिबार डलर लगायत सम्पूर्ण बिदेशिमुद्राको विनिमयदर ?